Tag: fikarohana sary google | Martech Zone
Tag: fikarohana sary google
Soso-kevitra: Ahoana ny fomba hahitanao sary mitovy amin'ny sary ao amin'ny tranokalan'ny sarinao miaraka amin'ny fikarohana sary Google
Zoma, Desambra 11, 2020 Zoma, Desambra 11, 2020 Douglas Karr
Matetika ny fikambanana dia mampiasa rakitra vector izay manana fahazoan-dàlana sy misy amin'ny alàlan'ny tranokala sary. Tonga ny fanamby rehefa te-hanavao ny antoka hafa ao anaty fikambanana iray izy ireo mba hampifanaraka ny endrika sy ny marika mifandraika amin'ny sary na sary famantarana navoaka teo aloha. Indraindray, izany dia mety vokatry ny fiovan'ny vola ihany koa… indraindray ny mpamorona vaovao na loharanom-pahalalana ho an'ny masoivoho dia mandray ny atiny sy ny ezaka famolavolana miaraka amin'ny fikambanana. Vao tsy ela akory izay no nitranga taminay rehefa nandray ny asany
Alarobia, Jona 21, 2017 Alakamisy, Jona 22, 2017 Serban Enache
Tamin'ny 2007, ny mpaka sary malaza Carol M. Highsmith dia nanolotra ny tahiriny nandritra ny androm-piainany manontolo tao amin'ny Tranombokin'ny Kongresy. Taona maro taty aoriana dia hitan'i Highsmith fa ny orinasa mpaka sary stock, Getty Images dia efa nandoa saram-pitsipika momba ny fahazoan-dàlana hampiasaina ireo sarim-panjakana ireo, tsy nahazoany alalana. Ary noho izany dia nametraka fitoriana $ 1 miliara dolara izy, milaza ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona sy ny fiampangana diso tafahoatra ary ny fiampangana diso momba ny sary efa ho 19,000. Tsy nomba azy ny fitsarana, saingy
Talata, Febroary 17, 2015 Alahady Oktobra 4, 2015 Nate Holmes
Alohan'ny handinihantsika toro-hevitra vitsivitsy momba ny fanatsarana ny fananana dizitaly, avelao hanandrana ny fikarohana ao amin'ny Google isika. Avelao isika hikaroka sary amin'ny iray amin'ireo sokajy mifaninana indrindra amin'ny Internet - alika kely mahafatifaty. Ahoana no ahafahan'ny Google mitana ny laharana iray amin'ny iray hafa? Ahoana no ahalalan'ny algorithm iray izay mahafatifaty? Ity no nolazain'i Peter Linsley, mpitantana vokatra ao amin'ny Google, momba ny fikarohana sary Google: Ny iraka ataontsika miaraka amin'i Google Image